निर्मलाको न्याय माग्दै नयाँ शैलीमा अभियानकर्ताहरु - निर्मलाको न्याय माग्दै नयाँ शैलीमा अभियानकर्ताहरु
निर्मलाको न्याय माग्दै नयाँ शैलीमा अभियानकर्ताहरु
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १८ मंसिर, 11:52:30 AM
नेपाल बहस डेस्क । कंञ्चनपुर कि १३ बर्षे बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन् । हत्याको कारण र हत्याराको छेउटुप्पोसम्म पत्ता लाग्न नसकेपछि निर्मलालाई न्याय दिलाउन माग गर्दै जनस्तरमा सरकारमाथि व्यापक दवाव सिर्जना गरिएको छ ।
निर्मलाका आमाबुबा अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका छन् भने बाबु मानसिक रोगी भएर अस्पताल भर्ना हुन पुगेका छन् । सर्वसाधारणदेखि अधिकारकर्मीहरु निर्मलाले न्याय पाउनु पर्ने माग र्गदै कंञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनमा सरिक भएका छन् र यो क्रममा अभियानकर्ताहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गरेका छन् ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षधरहरुले टाँसेको प्रहरी लगाएर पोस्टरहरु च्यात्ने र त्यसमा सरिकहरुमाथि सरकारले धरपकड गर्न थालेपछि अभियानकर्ताहरुले नयाँ शैलीमा पोस्टर टाँस्ने अभियान थालेका हुन् ।
काठमाडौंका सडक किनार र बिजुलीका पोलहरुमा निर्मलाको न्यायको माग गर्दै सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन लेखिएका पोस्टरहरु सरकारले च्यानत्न थालेपछि उनीहरुले नयाँ शैली अपनाउदै अब राजधानीबाट बाहिरिने सबै जिल्लाका गाडीमा पोष्टर टाँस्न थालेका छन् ।
हत्यारालाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै देशैभर चौतर्फी आलोचना
गत बिहीबारदेखि राजधानीमा पोस्टर टाँस्न सुरु गरेका युवाहरुले सोमबार हिजो नयाँ बसपार्क पुगेर उपत्यकाबाट बाहिरिने गाडीहरुमा पोस्टर टाँसेका हुन्। नयाँ शैलीको अभियान स्वरुप उनीहरुले यो भन्दा पहिले साना आकारका पोस्टर बनाएर ल्यापटप, झोला, ज्याकेट तथा सवारी साधनमा टाँसीसकेका छन् ।
अब उनीहरुले नालायक सरकार मौन रहेको भन्दै निर्मलाका लागि न्यायका अभियानकर्ताहरुले काठमाडौबाट दैनिक हजारौ संख्यामा बाहिरिने गाडीमा पोष्टर टास्न सुरु गरेका छन् । अभियानकर्ताहरुले यो अभियानको पोष्टर अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरुमा, व्यक्तिका झोला र ज्याकेटमा पनि टाँसेका छन्।
गत साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मला साउन ११ गते उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । प्रहरीलाई साउन १० गते नै निर्मला हराएको खबर दिँदा पनि प्रहरीले खोजीमा चासो नदेखाएको परिवारले जनाउदै आएका छन् ।
चार महिना वितिसक्दा पनि सरकारले निर्मलाका हत्यारालाई कारवाही गर्न नसकेको भन्दै देशैभर दैनिक रुपमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
अभियान स्वरुप नयाँ शैलीमा अपनाइएको निर्मलाका लागि न्याय पोष्टरमा उनको स्केच मात्रै छैन , ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ र ‘ह्यासट्याग इम्प्युनिटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ पनि लेखिएको छ । नयाँ युगको सुरुवात लेखिएको नारासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुस्कानसहितको पोष्टर मंसिर ११ गते मंगलबार राजधानीका विद्युतका पोल, चोकहरुमा टाँगिएको थियो ।
त्यसै गरी निर्मलाका लागि न्याय मागिएको पोस्टर पनि शहरभरि नै फैलाउन राजधानीबाट बाहिरिने गाडीमा टाँस्ने बिधि अपनाइएको हो । प्रहरीले न्याय मागिएका ती पोस्टरलाई च्यातेन मात्र, टाँस्ने केहीलाई पक्राउसमेत ग¥यो । न्याय खोज्नेहरु झनै उत्साहित भए ।
पोल र भित्तामा पोस्टर त टाँगिएको थियो नै, सोमबारसम्म आइपुग्दा देशव्यापी रुपमा सवारी साधनमा स्टिकर समेत टाँसिएका छन् । छोरीका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राख्दै गत २५ कात्तिकदेखि निर्मलाका बाबु यज्ञराज पन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मूलगेटमा २४ घण्टे धर्ना सुरु गरेका थिए । धर्ना कै शिलशिलामा यज्ञराजको मानसिक अवस्था बिग्रँदै गएपछि अहिले उनको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार भइरहेको छ ।
उता कंञ्चनपुरवासी घटना भएको ४ महिना बित्दा समेत सरकारले हत्यारा समाउन नसकेको भन्दै ४ दिने आन्दोनलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सोमबारदेखि फेरी आन्दोलन शुरु भएको छ ।
नागरिक सर्घष समितिको आयोजनामा गरिएको आन्दोलनमा सबै आम नागरिक सहभागी भएका छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मूलगेटमा कालोपट्टी बाँधेर बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्ना दिएका छन् ।
धर्ना दिने अभियान आज पनि जारी रहेको छ । आन्दोलन स्वरुप भोली बुधबार न्यायका लागि दिउँसै टर्च,मैनबत्ती र लाल्टिन बालेर प्रदर्शन गर्ने र बिहीबार मानवसाङ्लो बनाउने तयारी भएको छ ।
निर्मलाको अस्मिताको रक्षा गर्न सरकारसँग न्यायका लागि लडिरहेका छौ
सामाजिक सञ्जालमा समेत आवाज बुलन्द भएका छन् । अनि रोकिएका छैनन् समाचारमा कलमहरु । तै पनि खै त सरकार निर्मलाले न्याय पाएको ? किन मौन छ सरकार ? आज देशैभर सबै दल ,सबै वर्ग निर्मलाको न्याय माग गदै सडकमा उत्रेका छन् । नेपाल आमाकी छोरीलाई न्याय दिनु सरकार तिम्रो पनि त दायित्व होइन र ?
यसैबिषयमा नेपाल बहस डटकमसंग कंञ्चनपुरकी नागरिक संघर्ष समिति संयोजक मिना भण्डारीले कुरा गर्दै सरकारसँग मागेको हामीले न्याय हो । त्यहि न्याय दिन पनि यो दुई तिहाई सरकारले गर्न सकेन । जबसम्म सरकारले न्याय दिदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उनले बताएकी छिन् ।
भण्डारी भन्छिन्,- “बलात्कार गरी फालिएकी निर्मलाको अस्मिताको रक्षा गर्न र देशका अरु बालिका निर्मला नहुन भनेर हामी सरकारसँग न्यायका लागि लडिरहेका छौ । हाम्रो दुई तिहार्इको सरकार असक्षम भएको छ । जनताका आशु पुछन् र जनताको अधिकार दिन यो सरकारले किन सकेनन ? हामीले सहमति खोजेको होइन न्याय मात्र मागेको हो । सरकार किन मौन भाछ ? जनतालाई यो सरकारले न्याय नदिने भयो । अब हामी कुन देश जाउ ? कँहि छैन होला न्याय माग्दा नपाएको तर नेपाल यस्तो देश भएर चिनिदै छ आज अरु छोरी निर्मला नहुन भनेर देशैभर आन्दोलन र बिरोध अभियान चल्दा पनि सरकार मौन भएको छ ।”
बलात्कारपछिको हत्या अनुसन्धानमा चरम लापरबाही भएको भन्दै प्रहरीको सेवाबाट हटाइएका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टले पुनर्वाहलीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा निवदेन दिएकोमा आपत्ती जनाउदै सरकारले जनतालाई झुटो बोल्न नाटक गरेको भण्डारीको भनाई छ ।
उनीहरु अपराधी हुन भने कारवाही हुनु जरुरी छ । जिल्लामो सुरक्षा प्रमुख भएर बसेको व्यक्तिले यति ठूलो अपराध गर्दा पनि संरक्षण गरेर राख्नु भएन । यदि उनीहरुले अपराध नगरेको भए कँहा गए त अपराधी ? किन समाउन सकेन् सरकारले हत्यारालाई ?
अहिले पनि प्रहरीको अनुसन्धान टोली कंचनपुरमा नै बसेर केही अन्य व्यक्तिको डिएनए परिक्षण लगायतको अनुसन्धान गरी रहेपनि अपराधी पक्राउ पर्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । गत साउन १० गते साथी बविता बमको घर पढ्न गएकी कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्त साउन ११ गते घरनजिकै रहेको उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।
२०७५, १८ मंसिर, 11:52:30 AM
सरकारी चिकित्सकहरूकाे संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउने तयारी
बलात्कारको अरोपमा ७० वर्षे बृद्ध पक्राउ
निर्मला पन्तको स्मृतिमा बाल उद्यान निर्माण हुँदै
निर्मलाका हत्यारा बालुवाटार वा सिंहदरबार जहाँ भए पनि छाडिन्न : गृहमन्त्री